တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Taro KONO အား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Taro KONO အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်းဦးနှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ၊ စစ်သံမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူများကရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်၌စတင် လျှောက်လှမ်း ချိန်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံကစေတနာထားပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုများနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ထဲထဲဝင်ဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုများကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ အောင်မြင်မှုများရှိသကဲ့သို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆဲများလည်း ရှိနေသေးကြောင်း၊ ထိုသို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်စဉ် ရခိုင်အရေးကိစ္စဖြစ်ပေါ် လာကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့်နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာက ဖြစ်စဉ်များ အားအမှန်အတိုင်းသိရှိပြီး ယုံကြည်မှုနှင့်စာနာနားလည်မှု ရှိရန်အရေးကြီးကြောင်းဦးစွာပြောကြားသည်။
ထို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်း နေမှုအခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့်သမာသမတ်ရှိ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ရှာသည့် လုပ်ရပ်မျိုး မလုပ်မိရန်လိုအပ်ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အခြေအနေမှန်များကို ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ထုတ်ကာ နိုင်ငံတကာက သိရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာ ပြည်သူများအား စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည့် ပြဿနာပိုမိုကြီးထွားစေသောအခြေအနေ မျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန်အရေးကြီးသည့်အခြေအနေများ၊ ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တပ်မတော်ကပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိမှုအခြေအနေများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကူညီထောက်ပံ့ရေး များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဒေသခံရခိုင် တိုင်းရင်းသားများကိုပါ သာတူညီမျှသည့်ကူညီ ဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေးရန်လိုအပ်မှု အခြေအနေများ၊ ငြိမ်းချမ်းသည့်ဒေသများတွင် ဂျပန်နိုင်ငံက ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအောင်မြင်မှုရရှိရေး ဂျပန်နိုင်ငံကကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ ရန်ကုန်မြို့အပါအ၀င် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး တစ်ပြေးညီ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်သားတစ်ဦးချင်းစီ၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အခြေအနေများအားရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျသညျ ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Taro KONO အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ဆနျးဦးနှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ၊ စဈသံမှူးနှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံတှငျ ပွညျသူမြားကရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါ၌စတငျ လြှောကျလှမျး ခြိနျတှငျ ဂပြနျနိုငျငံကစတေနာထားပွီးကူညီဆောငျရှကျပေးမှုမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြး ရေးလုပျငနျးစဉျမြား၌ ထဲထဲဝငျဝငျ ကူညီဆောငျရှကျပေးမှုမြားကိုကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ အောငျမွငျမှုမြားရှိသကဲ့သို့ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျဆဲမြားလညျး ရှိနသေေးကွောငျး၊ ထိုသို့ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျး မြားဆောငျရှကျစဉျ ရခိုငျအရေးကိစ်စဖွဈပျေါ လာကွောငျး၊ မိမိတို့အနဖွေငျ့နိုငျငံ၏အခြုပျအခွာအာဏာနှငျ့ ပွညျသူမြား၏ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျကို ကာကှယျနခွေငျးသာဖွဈကွောငျး၊ ထိုသို့ဆောငျရှကျရာတှငျ နိုငျငံတကာက ဖွဈစဉျမြား အားအမှနျအတိုငျးသိရှိပွီး ယုံကွညျမှုနှငျ့စာနာနားလညျမှု ရှိရနျအရေးကွီးကွောငျးဦးစှာပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျမွနျမာနိုငျငံ၏ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ လြှောကျလှမျး နမှေုအခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြားနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျတညျငွိမျ အေးခမျြးရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးတို့တှငျ ဂပြနျနိုငျငံမှ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေု အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး လှတျလပျသောစုံစမျးစဈဆေး ရေးအဖှဲ့ အနဖွေငျ့သမာသမတျရှိ၍ မွနျမာနိုငျငံအပျေါအပွဈရှာသညျ့ လုပျရပျမြိုး မလုပျမိရနျလိုအပျပွီး ဖွဈပှားခဲ့သညျ့အခွအေနမှေနျမြားကို ပျေါလှငျအောငျဖျောထုတျကာ နိုငျငံတကာက သိရှိအောငျဆောငျရှကျရနျလိုအပျသညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာ ပွညျသူမြားအား စိုးရိမျစိတျဖွဈပျေါစနေိုငျမညျ့ ပွဿနာပိုမိုကွီးထှားစသေောအခွအေနေ မြိုးမဖွဈပျေါစရေနျအရေးကွီးသညျ့အခွအေနမြေား၊ ကုလသမဂ်ဂအပါအဝငျ လကျအောကျခံ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကို နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဦးဆောငျသညျ့ ရခိုငျပွညျနယျ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုတိုးတကျရေး အကောငျအထညျဖျောရေး ဗဟိုကျောမတီမှ ဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး တပျမတျောကပါဝငျ ကူညီဆောငျရှကျ ပေးလကျြရှိမှုအခွအေနမြေား၊ ကုလသမဂ်ဂ အပါအဝငျ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးမြား အနဖွေငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ကူညီထောကျပံ့ရေး မြားလုပျဆောငျရာတှငျ ဒသေခံရခိုငျ တိုငျးရငျးသားမြားကိုပါ သာတူညီမြှသညျ့ကူညီ ဆောငျရှကျမှုမြိုးပေးရနျလိုအပျမှု အခွအေနမြေား၊ ငွိမျးခမျြးသညျ့ဒသေမြားတှငျ ဂပြနျနိုငျငံက ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြားအောငျမွငျမှုရရှိရေး ဂပြနျနိုငျငံကကူညီဆောငျရှကျ ပေးနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ ရနျကုနျမွို့အပါအဝငျ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံး တဈပွေးညီ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျအောငျကူညီဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောသားတဈဦးခငျြးစီ၏စှမျးရညျမွှငျ့တငျရေး ဆိုငျရာလကေ့ငျြ့ရေးမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး အခွအေနမြေားအားရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအား အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျး ပေးအပျခဲ့သညျ။